မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဖူးစာဆုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် အပိုင်း ၁ - ၅
Posted by mabaydar at 3:38 PM
haha.. totally forget all previous story. luckily u post it together the same page.i can finally read the new episode. =) thank for effort.
2/26/2012 1:24 AM
ညီမရေ မြန်ညမန်လေ နောက်တစ်ပိုင်း နော်.
အချစ် ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် ဖွဲ့ ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်လေးက .. အသေးစိတ်ကျတယ်
2/27/2012 5:52 PM
Thank you for the post. I have been waiting for this.
2/28/2012 3:44 PM
ကျေးဇူးပဲမဗေဒါ ရေဒီဇာတ်လမ်းကိုအရမ်းဖတ်ချင်နေတာ။ ဆက်ရေးပါနော်မျာ်နေမယ်
Typical Story Line but wondering how it will develop. Good Job.